Warbixin: Waddooyinka Muqdisho oo wali la xiro, kaddib doorashadii Madaxweyne Farmaajo
Home Somali News Warbixin: Waddooyinka Muqdisho oo wali la xiro, kaddib doorashadii Madaxweyne Farmaajo
Xirnaanshaha waddooyinka ayaa ahaa waxybaahihii ay ku caan baxday dowladdii xilkeeda dhamaaday, waxayna aheyd dhaliilaha ugu badan ee loo jeedinayay, taasoo noqotay fursad ay ku owr-kacsadaan Musharaxiintii xilka Madaxweynaha u tartameysay oo mar walba ku eedeyn jiray dowladda xirnaanshaha waddooyinka iyo dhibaatooyinka shacabka ku qabaan.
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu xusuustaa waxyaabo badan oo uu balan-qaaday, markii uu jeedinayay khudbaddiisii Musharaxnimo.
Balamihii uu sameeyay ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta xirnaanshaha waddootinka oo shacabka ku nool Muqdisho ay dhibaato badan ku qabaan.
Dad badan ayaa aaminsanaa in hadalkaas inuu ahaa waxyaabihii dadka u laab-qaboojiye, maadaama xirnaanshaha waddooyinka ay aheyd utun ku taagneyd.
Farmaajo ayaa u balan qaaday shacabka in dowladdiisa aanay waddo xireyn, isla markaana dhaqanka xirida waddooyinka uu bedeli doono.
“Waxaan bedalaynaa oo kale haddii aad fursad isiisaan oo aad ii doorataan xilkaan aan raadinayo in dowladdu awoodeedu ku caburiso shacabka intii ay ugu adeegi lahayd, jidadkaan la xirayo oo maalmahan oo dhan xiran waxa weeye waa qeyb ka mid ah caburin, haddii aad i doorataan hadaan magaaladan nabad keeni waayo baaburti waa weyneyd yaan gadaal ka geli, jid la xirayo majirayo, markaan Shabaab ka adkaanno markaas baan baabuurta ku raaxeysaneynaa, laakiin isma keeni karto in adoo dagaal ku jira iney jidadku umadda ka xiran yihiin dadka u baahna”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo khudbadii uu Baarlamanaka ka jeedinayay ka hor doorashadii 8-da February
Doorashada Farmaajo kaddib dad badan oo hadalkaas soo jiiray ayaa ku laab-qabowsaday, isla markaana niyada gishtay in aanay mar dambe jiri doonin caqabad dambe oo ku aadan in waddooyinka la xiro.
In ka badan saddex jeer ayaa waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho la xiray, kaddib doorashadii Madaxweyne Farmaajo, waxayna arrintan saameyn ku yeelatay dad ka shaqeysta magaalada, ardayda iyo dad arrimo caafimaad u socday.
Waddo xiristii ugu yaabka badneyd ayaa aheyd 18-kii bishan oo ku beegneyd maalintii shalay oo sabti aheyd, waxaana aroor hore ay dadka ku soo tooseen ciidamo fara badan oo waddooyinka ku sugan, dadka iyo gaadiidkana ka celinaya.
Dadka reer Muqdisho ayaa layaab ku noqotay dhacdadii shalay, maadaama marka wado la xirayo ay sii ogaan jireen, balse markii waagu baryay ku soo toosay jidadka oo xiran.
Madaxweyne Farmaajo wali kama uusan hadlin waddooyinka la xiro, maadaama uu balan qaaday in aan wax jid dambe la xiri doono, waxaana dad badan ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixi doono, maadaama uu ahaa hadal uu horay olole ku galay.
Shacabka Muqdisho ayaa xaqiisaday in is bedel kasta oo hoggaanka ku dhaco aanu qeyb ka noqon doonin nidaamka xilligaas jiray ama hab dhaqankii dowliga ahaa, waxaana hadal walba oo siyaasiyiinta ku kasbadaan shacabka loo qaadan doono inay tahay balan aan afka soo dhaafin.
Dadka odorasa siyaasada ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu ahaa musharaxii ugu balan-qaadka badnaa, si gaar ahna u ogaa dhibaatooyinka shacabka tabanayeen, wuxuuna siyaasiyiinta kale uga duwanaa inuu garanayay lahjada lagula hadlo shacabka iyo sida loo soo jiito.
Madaxweyne Biixi ” Garowe uma socono, dadkaasina waa GOB”